G20 Gwaro haazorambi kusika murau chitsva cryptocurrencies - Blockchain News
Kurume 18, 2018 arun
G20 Gwaro haazorambi kusika murau chitsva cryptocurrencies
The yose Gwaro kuti boka kuburikidza welter rwezvemabhengi uye musika kuchinja pashure mari dambudziko akati zvichaita pivot zvakawanda kune aongorora mitemo raivapo uye kubva mazano vatsva.
The Financial Kugadzikana Board (FSB), iyo rinoronga zvemari murau Group of 20 upfumi, uyewo akaramba kunoda kubva vamwe G20 nhengo waidzora cryptocurrencies kufanana bitcoin.
Asi chiratidzo zvishoma nokubvumirana kuti yakakura chiito, ari FSB akati Kufambisa zvakawanda dzakawanda zvaidiwa kuti chivhariso umboo Makwanza mu vachiongorora nokukurumidza Virtual asi achiri tuduku kwemauto munokosha zvishoma pane 1 muzana pose GDP chinenge chakasimba.
“The FSB kwekutanga naPauro ndechokuti crypto-zvinhu regai iine ngozi kune yose nemari kugadzikana panguva ino,” FSB Chair Mark Carney akati tsamba G20 nechepakati vokubhengi uye mari vashumiri vachasangana Aires neMuvhuro uye Chipiri.
“Sezvo basa rayo kugadzirisa mhosva akarongwa kuti akakonzera mari dambudziko anoswedera kunopera, ari FSB iri kuramba pivoting kubva magadzirirwe itsva mutemo zvirongwa vakananga simba Implementation uye zvakaoma kunyatsoongorora migumisiro vakabvumirana G20 kuchinja,” Carney akati.
Mumiririri fung ...
The Bitfury Group kuti ...
JD.com ari kuronga blockchain-se-a-basa pakakwirira
Nhasi Chinese e-comm ...
Previous Post:Peter Thiel: Kuchava chete kuva rimwe paIndaneti yakaenzana nendarama – Bitcoin
Next Post:Brazilian Exchange Foxbit ichiri pasi, allowed withdrawals